CULTS ခရစ်ယာန်နှင့်အစွန်းရောက်အယူဝါဒ | Calvary Burmese Church
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ယုံကြည်ရာဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်၍ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိ သော လူ့အဖွဲ့စည်းတွင် ယနေ့ အသက်ရှင်နေထိုင်ရသူများဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဘာသာ အယူဝါဒတိုင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး၊ မေတ္တာ တရားအနှစ်သာရများရှိကြသည်။ သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသော်လည်းကောင်း သူတို့သာလျှင် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သူများဖြစ်ကြောင်းနှင့် ခရစ်ယာန်အယူဝါဒစစ်ကို ရထားသူများဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာပြီး လက်ရှိအသင်းတော်များမှာ မှားယွင်းနေသည်ဟု တင်ပြပြောဆိုလာပါက သတိထားဖို့လိုအပ်လာ သည်။ ထိုသူများသည် မူလယုံကြည်ချက်အယူဝါဒများကို ကိုယ်လိုရာစွဲပြီး အစွန်းရောက်တွေးခေါ် ခြင်းဖြင့် အစွန်းရောက်အယူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့မြန်မာပြည်ရှိ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်အချို့တွင် အစွန်းရောက်အယူဝါဒသွန်သင်မှု များရှိနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ နိုင်ငံခြားမှ အကူအညီများကိုယူပြီး အသင်းတော်ဂိုဏ်းဂဏသစ်များ တည်ထောင်လာကြသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် အစွန်းရောက် ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းအချို့လည်း ရောနှောဝင်ရောက်လာသည်။ ထို့ပြင် အမျိုးမျိုးသောသွန်သင်မှုသြ၀ါဒများနှင့် အစွန်းရောက်ဝါဒ များသည်လည်း လက်ရှိအသင်းတော်များအတွင်းသို့ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ဝင်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ထိုအစွန်း ရောက်သွန်သင်မှုသြ၀ါဒများသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များကို များစွာ ဒုက္ခပေးလာနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် အစွန်းရောက်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများ၏ မှားယွင်းမှုပြဿနာများကို မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပရိယာယ် များလှသော လှည့်စားမှုနှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှုတို့ကို မည်ကဲ့သို့ကိုင် တွယ်ရှောင်ရှားမည်နည်း။ အကယ်၍ ထိုသို့သော အစွန်းရောက်အယူဝါဒ၊ ဂိုဏ်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ခုနှင့် ဆက်နွယ်ပတ်သက်သွားသည့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတစ်ဦးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်ပေးနိုင်သနည်း။ ထိုသို့သော အစွန်းရောက်ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံမည်နည်း (သို့) မည်ကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်မည်နည်း။ ယုံကြည်သူ ခရစ်ယာန်တိုင်း သည် အမှားနှင့် အမှန်ကိုခွဲခြားသိပြီး ပညာရှိစွာ ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် သမ္မာသတိဖြင့် လျှောက်လှမ်းအသက်ရှင်နိုင်ရန် အစွန်းရောက်အယူသီးတို့၏ ၀ါဒသဘောသဘာဝများကို တင်ပြ လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အစွန်းရောက်အယူသီးဂိုဏ်းဝါဒများကို အင်္ဂလိပ်လို (Cults) ဟုခေါ်သည်။ Cults ဟူသော စကားလုံးသည် ဝေါဟာရအဓိပါယ်များစွာရှိပြီး အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်၊ ကျင့်သုံးမှု နှင့်ပတ်သက်သော စနစ်ကြီးကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဝေါဟာရကို အဘိဓာန်ကျမ်းများတွင် (၁) စွဲလန်းယုံကြည်မှု (၂) ဘာသာအယူဝါဒဆိုင်ရာသီးသန့်ကျင့်သုံးသော ဓလေ့စရိုက်စနစ် (၃) ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး သို့မဟုတ် အယူဝါဒတစ်ခုကို တန်းတန်းစွဲသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း (၄) ယင်းသို့သော အယူဝါ ဒ ရှိသောလူတစ်စု သို့အဟုတ် အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခု (၅) လွဲမှားသောတရားတော်နှင့် မကိုက်ညီ သော ဘာသာအယူဝါဒ သို့မဟုတ် တတ္တိ၀ါဒ သို့မဟုတ် ယင်းဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူဟုဖော်ပြ ထားသည်။ Theology Content အရ Cults ဟူသည် အများလက်ခံထားသော အခြေခံအဖွဲ့အစည်း များ၏ ပြင်ပမှာရှိနေသော သီးခြားအုပ်စုကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မူလယုံကြည်သူများ မှဖြာထွက်လာခဲ့ပြီး မူလဘာသာအယူဝါဒအပေါ် ကိုယ်လိုရာစွဲပြီး အစွန်းရောက်အတွေးအခေါ်များ သွတ်သွင်းကာ ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသည့်ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သမိုင်းစဉ်လာ ခရစ်ယာန် ယုံ ကြည်ချက်များကို မလိုက်နာသောအုပ်စုကို အစွန်းရောက်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများ Cults ဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်။
Cults ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖွင့်ဆိုနိုင်သော်လည်း လွယ်ကူစွာသတ်မှတ်ရလျှင် ဘုရား သခင်၏ သုံးပါးတစ်ဆူဖြစ်ခြင်း၊ ခရစ်တော် လူ့ဇာတိခံယူခြင်းစသည့် အရာများအပေါ်မူတည်ပြီး သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Cults များသည် အောသိုဒေါ့သွန်သင်မှုများကို ဆန့်ကျင်ပြစ်တင် ကြသူများဖြစ်သည်။ ဆရာကြီး Walter Martin က Cults ဟူသော စကားလုံးကို အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို ရာတွင် “ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၏ မူလယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်များ၊ အထူးသဖြင့် ဘုရားသခင် သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် လူ့ဇာတိခံယူသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်အပေါ် လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ မှားယွင်းစွာ အနက်ဖွင့်မှုကြောင့် အစွန်းရောက်သွားသောအဖွဲ့အစည်းဟု ခေါ်သည်။
အစွန်းရောက်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများသည် သမ္မာကျမ်းဆိုင်ရာခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှု များမှာ လမ်းလွဲမှားယွင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်၏ သမိုင်းဝင်သွန်သင်မှုများကို ငြင်းပယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက ဤအရာသည် မှန်ကန်သော အသင်း တော်နှင့် ကမ္ဘာကြီးကို လှည့်စားဖို့ရန်အတွက် အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေသော မှားယွင်းသော ခရစ် တော်နှင့် မှားယွင်းသော ဧ၀ံဂေလိတရားများသာ ဖြစ်သည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။
World Books Encyclopedia ၌ Cults ဆိုသည်မှာ သက်ရှိထင်ရှားခေါင်းဆောင်တစ် ယောက်၏ သွန်သင်မှုအသစ် သို့မဟုတ် သမာရိုးကျမဟုတ်သော သွန်သင်မှုများအတွက် ပေးဆပ် သောသူ၊ သစ္စာရှိသောသူ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ Cults ဟူသော ဝေါဟာရအသုံး အနှုန်းသည် မည်သည့်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုမှုစနစ်ကိုမဆို ရည်ညွှန်းသည်။ နတ်ဘုရားများကို ကိုးကွယ် သောအုပ်စုများကိုပင် Cults ဟုခေါ်သည်။
ယနေ့အချိန်ခါတွင် Cults ဆိုသည်မှာ ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့် အသစ်သော သွန်သင်မှုနှင့် ကျင့်သုံးမှုများကို စည်းရုံးနိုးဆော်သည့် သက်ရှိခေါင်းဆောင်နောက်လိုက်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ကမ္ဘာပေါ်တွင် Cults အဖွဲ့ပေါင်း 3000 ကျော်ရှိသည် သက်လတ်ပိုင်း အများဆုံးဖြစ်ပြီး အသင်းသာ ၃ သန်းခန့်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
သိပံ္ပပညာနှင့် စက်မှု၌လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာသော ယနေ့ခေတ်ကြီးတွင် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်း၌ အလွန်တိုးတက်လာသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများက လူ၏စိတ်ဆန္ဒကို ကျေနပ်မှုရှိအောင် မဖြည့်စွမ်း နိုင်သဖြင့် ရုပ်ဝတ္ထုများအလွန် တိုးတက်နေသော်လည်း လူတို့၏စိတ်ဓာတ်ရေးရာတွင် လျော့ကျနေ သည်။ ထိုအခါ စိုးရိမ်မှု၊ မရောင့်ရဲမှု၊ မလုံခြုံမှုနှင့် အလိုမပြည့်မှုများ တိုးပွားလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် လူအများသည် အပြောင်းအလဲကို အားထားလာကြသည်။
မသေချာမရေရာသောအခြေအနေနှင့် လူသားများရင်ဆိုင်လာရသောအခါ သူတို့တွင် စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေါ်ပေါက်လာသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုဒဏ်ကို သူတို့သည် မခံနိုင်၍ အားကိုးရာမဲ့အခြေ အနေမှ လွတ်မြောက်ရန် ကြံဆောင်ကြသည်။ အားကိုးစရာတစ်ခုခုကို ရှာဖွေကြသည်။ မိမိဥာဏ် ပညာနှင့် ဘ၀အတွေ့အကြုံကိုအသုံးပြုပြီး ပေါ်ပေါက်လာသောအခြေအနေနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်သောအခါ စိတ်၏အေးချမ်းမှုမခံစားရသည့်အခြေအနေဖြစ်လာ သည်။
သူတို့၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် လက်တွေ့ဘ၀တို့ကိုက်ညီမှုမရှိသောအခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရပြီး ထွက်ပေါက်ရှာကြသည်။ ထာဝရမဟုတ်သည့်တိုင်အောင် တဒင်္ဂပေးနိုင်သည့်စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာဖွေကာလာကြသည်။ လောကဒဏ်ကို နေ့စဉ်နှင့် အမျှခံစား လာရသောလူသားများအနေဖြင့် ထွက်ပေါက်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတွင် လူမှာပြောင်းလဲမှုကြီး ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင်လည်း ကောင်း၊ မိသားစုညီညွတ်မှုပြိုကွဲသောအခါတွင် လည်းကောင်း၊ အာဏာပိုင်များနှင့်သက်ဆိုင် သော အခက်အခဲများပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင်လည်းကောင်း၊ အစွန်းရောက် အယူသီးဂိုဏ်း ၀ါဒများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်ဟု သုတေသီများက အကြောင်းပြကြသည်။
အစွန်းရောက်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများသည် ခရစ်တော်အပေါ် ယုံကြည်ချက်သဘော ထားများကို ငြင်းပယ်သောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သာ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များ ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ပြီး တဆက်တည်းမှာပင် ခရစ်တော်အပေါ် ယုံကြည်ချက်များကို ငြင်းဆို ကြသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန် ယုံကြည်ချက်များအပေါ်တွင် ရပ်တည်နေသည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို့သာစစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ပုံစံဖြစ်သည်ဟုကြွေးကြော်ကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည့် သွန်သင်မှုအုပ်စုဘာသာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများကို အစွန်းရောက်အယူသီး ဂိုဏ်းဝါဒများဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
ကျမ်းစာအပိုရှိခြင်း (သို့) ကျမ်းစာအပြင်ဘက်မှ အခွင့်အာဏာ
ယေရှုခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင်၏ သားတော်အဖြစ် ငြင်းပယ်ခြင်း (သို့) မပြည့်အ၀ အသိ အမှတ်မပြုခြင်း။
ဘုရားကတိနှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာပြင်ပမှ သွန်သင်ခြင်း (သုံးပါးတစ်ဆူ)
ထူးခြားဆန်းကျယ်သော အသစ်သောသွန်သင်မှုများနှင့် ကျင့်သုံးမှုများကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော် နေသည့် သက်ရှိခေါင်းဆောင်ရှိသည်။ ခေါင်းဆောင်များက သူတို့တွင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အမှန် တရားများကို သီးသန့်ပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့် သူ၏အမိန့်ကို သစ္စာရှိရှိနှင့် အကြွင်းမဲ့နာခံဖို့ အသင်းသားများအားပြောဆိုသည်။
ဗဟိုဦးစီးစနစ်ကျင့်သုံးပြီး ဦးဆောင်သူများက သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံမှ အကြွင်းမဲ့ စေလွှတ်ခြင်းခံရသော တမန်တော်အဖြစ်ခံယူသည်။ ထိုကဲ့သို့သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် အခွင့် အထူးဆက်သွယ်မှုရှိသောကြောင့် ဓမ္မအတွေးအခေါ်များကို ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်နှုတ်တိုက် သွန်သင်ပေးရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းဆောင်သည် သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားလိုလိုသွန်သင်တတ်ပြီး ဘုရားသခင်ကိုတွေ့နိုင်ဖို့ ၀င်ပေါက်လမ်းကြောင်းမှာ သူသာဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်သည် မိမိအဖွဲ့အစည်းအပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိလာသည်။
ထိုသို့ထက်မြက်သည့် ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့် နောက်လိုက်များက ခေါင်းဆောင်အပေါ် လုံးဝမှီခိုယုံကြည်ပြီး အသက်ရှင်ပြုမူနေထိုင်ကြသည်။ အသင်းသားများသည်လည်း မိမိတို့ပိုင်ဆိုင် သော ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို မိမိအသင်းအဖွဲ့အတွက် ပေးလှူပါဝင်ကြသည်။ အကျင့်ပျက်သော မကောင်းသည့် ခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့သောအခါ အကျိုးကျေးဇူးမှာ ပျက်စီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အစွန်းရောက်ခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများသည် ခေါင်းဆောင်ကို အခြေပြု ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုဂ္ဂိလိကသဘော၊ အနည်းစုသဘောကို ဆောင်သည်။ သို့သော် ဂိုဏ်းဝင် အရေအတွက်၊ ငွေကြေးနှင့် သြဇာအာဏာ တိုးပွားလာသောအခါ ဘာသာရေးဂိုဏ်း (Relagion) တစ်ခုအသွင်သို့ ကူးပြောင်းလာတတ်သည်။
အိပ်မက်သစ်မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(2)၊ 2003၊ မှ မောင်ဇလပ်ဖြူရေးသားသော ခရစ်ယာန်နှင့်အစွန်းရောက်အယူဝါဒ(2) ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
Source: Stream of Life ခရစ်ယာန်တေးသီချင်းရင်ပြင်
This entry was posted on September 13, 2011 by thawngno in Articles Christian Life, Maung Zalatt Phyu and tagged cult, Maung Zalatt Phyu, Stream of Life.	Shortlink
VISITORS NUMBER	78,503 Since July 2011
ပေါ်ပြူလာစာမျက်နှာများ	Da Vinci Code	Brief History	ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများအကြောင်း အကျဉ်း (ဂျူး)	Rev. Dr. Joseph Glaze's sermon on 18th Anniversary	Rev. Dr. Maung Maung Htwe	ကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေ	သမ္မာကျမ်းစာမှပုဂ္ဂိုလ်များ (ဒံယေလ)	Hours & Info____________________